Alvaro Morata, Sergio Aguero Iyo Sadio Mane Oo Hogaaminaya Shax Cajiib Ah Oo Laga Sameeyay Xidigaha Dhaawaca Kaga Maqan Kooxaha Premier Leaque- Kooxaha Premier Leaque Way La Tartami Lahaayeen. - WWW.Gool24.net
Alvaro Morata, Sergio Aguero Iyo Sadio Mane Oo Hogaaminaya Shax Cajiib Ah Oo Laga Sameeyay Xidigaha Dhaawaca Kaga Maqan Kooxaha Premier Leaque- Kooxaha Premier Leaque Way La Tartami Lahaayeen.
Waxaa laysku diyaarinayaa kulamada siddeedaad ee horyaalka Premier Leaque laakiin waxaa jira ciyaartoy badan oo aan wax fursad ah u heli doonin in ay kulamadan ciyaaraan dhaawacyo soo gaadhay awgeed. Ciyaartoyda ayay qaar ku soo dhaawcmeen kulamadii caalamiga ahaa, kuwo kale ayaa waqti badan maqnaa halka kuwo kale ay dhaawacmeen kulamadii Premier Leaque ee ugu danbeeyay.
Haddaba wargayska Bleacher Report ayaa soo saaray shaxda kooxda ugu fiican ee laga samayn karo liiska dheer ee ciyaartoyda dhaawaca kaga maqan kooxaha Premier Leaque waxaana sidoo kale jira xidigo kaydka ugu qoran shaxda kooxdan sida ay tahay koox rasmi ah oo kale.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shaxda kooxdan laga sameeyay ciyaartoyda dhaawaca ku maqan ee ka tirsan kooxaha Premier leaque iyo waliba liiska ciyaartoyda kaydka ugu qoran halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Waxaa shaxdan goolka ugu jira Tom Heaton oo dhaawaca kaga maqan kooxda Burnley kaas oo waqti dheer sii maqnaan doona waxaana afarta difaaca ah ku wada jira Mustafi oo kulankii Germany ku soo dhaawacmay, Kompany iyo Menjamin Mendy oo Man City dhaawacyo kaga maqan si la mid ah Coleman oo waqti dheer Everton dhaawaca kaga maqan.
Dhexda danbe ee burburiyaha waxaa isku arkay xidigaha ree France ee Paul Pogba iyo N’Golo Kante oo dhaawacyo kaga maqan Manchester United iyo Chelsea sida ay u kala horeeyaan waana xidigo marka ay wada ciyaaraan ay adag tahay in khadka dhexe lagu soo dhaafi karo.
Grabka midig ee weerarka waxaa loo doortay Santi Cazorla oo waqti dheer garoomada dhaawac kaga maqan isla markaana ay jamaahiirta Gunners si wayn u tabayaan adeegiisii halka garabka bidix ee weerarka uu ku jiro Sadio Mane oo ay jamaahiirta Liverpool qalbi jab ka qaadeen kadib markii uu dhawaan ku soo dhaawacmay waajibaadka xulka qarankiisa Senegal.
Laakiin waxaa safka weerarka hogaaminaya Alvaro Morata iyo Sergio Aguero oo ka hor kulamadii caalamiga ahaa dhaawacyo soo gaadheen, waxaana sidaa ku dhamaystiran shaxda kooxda ugu fiican ee xidigaha dhaawaca kaga maqan kooxaha Premier Leaque.
Balse waxaa kaydka ugu qoran iyaguna xidigaha muhiimka ah ee dhawacyada ku maqan ka mid ah Marcos Rojo, Danny Rose, Victor Wanyama, Dembele, Fellaini, Adam Lallana, Lamela iyo Ibrahimovic.
Halkan Kaga Bogo Shaxda kooxda ugu fiican ee laga sameeyay ciyaartoyda kooxaha Premier Leaque dhaawac kaga maqan iyo waliba liiska ciyaartoyda kaydka loogu qoray.